Turkey: Hagia Sophia oo dib looga dhigay Masjid iyo Reer Galbeedka oo ka carrooday - Caasimada Online
Home Dunida Turkey: Hagia Sophia oo dib looga dhigay Masjid iyo Reer Galbeedka oo...
Turkey: Hagia Sophia oo dib looga dhigay Masjid iyo Reer Galbeedka oo ka carrooday
Istanbul (Caasimada Online) – Maxkamad sare oo Turkish ah ayaa maanta go’aamisay in laga noqdo xeer hore oo Hagia Sophia ka dhigay madxaf, taasi oo dhabbaha u xaareysa in dhismahan caanka ah dib loogu celiyo Masjid.
Golaha Qaranka, oo ah maamulka maxkamadeed ee ugu sarreeya Turkiga, kaasi oo 2-dii July ka dooday kiiskan, ayaa maanta nasakhay go’aan ay 1934-kii gaareen golaha wasiirada oo Hagia Sophia ka dhigay Madxaf.
Go’aankan ayaa ka carreysiiyey dalal ay ka mid tahay Greece, Mareykanka, Faransiiska iyo ururo Kirishtan ah.
Xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka Mike Pompeo ayaa dhalleeceeyey go’aanka Turkey kadib markii dhegaha laga fureystay baaqiisii Arbacadii ee ku booriyey Turkey in Hagia Sophia ay sii ahaato madxaf.
Dhismaha Hagia Sophia oo ahaa Masjid, kuna yaalla Istanbul, ayaa waxaa madxaf loogu beddelay go’aan ay dowladda Turkiga gaartay 1934-kii, xilligaas oo ahayd sanadihii hore calmaaniyadda uu Turkiga ka dhigay aas-aasaheeda Mustafa Kemal Ataturk.
Hagia Sophia, oo ku yaal Istanbul, ayaa markii waxay ay muddo 900 sano ahayd kaniisad, waxaana kadib laga dhigay Masjid-kii ugu muhiimsanaa taariikhda Cusmaaniyiinta muddo 500 sano ah kadib.